Numeri 12 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
12 Zvino Miriyemu naAroni vakatanga kupopotera Mosesi nokuda kwomudzimai muKushi waakanga awana, nokuti akanga awana mudzimai muKushi.+ 2 Vakaramba vachiti: “Jehovha akataura achishandisa Mosesi oga here? Haana kutaura achitishandisawo here?”+ Zvino Jehovha akanga akateerera.+ 3 Murume uyu, iye Mosesi, ndiye akanga ari munhu munyoro+ kwazvo kupfuura vanhu vose vaiva panyika. 4 Jehovha akabva ati kuna Mosesi naAroni naMiriyemu: “Budai, imi vatatu, muende kutende rokusanganira.” Naizvozvo ivo vari vatatu vakabuda. 5 Pashure paizvozvo Jehovha akaburuka ari mushongwe yegore,+ akamira pasuo retende, akashevedza Aroni naMiriyemu. Ivo vari vaviri vakabva vaenda mberi. 6 Zvino akati: “Ndapota, inzwai mashoko angu. Kudai paiva nomuprofita wenyu nokuda kwaJehovha, ndaizozvizivisa kwaari ndichishandisa zviratidzo.+ Ndaizotaura naye achirota.+ 7 Hazvina kudaro nomushumiri wangu Mosesi!+ Iye karonzeswa imba yangu yose.+ 8 Ndinotaura naye zvakananga,+ ndichimuratidza, kwete nezvirahwe;+ uye iye anoona chitarisiko chaJehovha.+ Ko zvino, maregererei kutya kupopotera mushumiri wangu, iye Mosesi?”+ 9 Jehovha akavatsamwira kwazvo, akabva ipapo. 10 Gore rakabva pamusoro petende, uye tarira! Miriyemu akanga arohwa nemaperembudzi akachena sechando.+ Aroni akabva atendeukira kuna Miriyemu, akamuona arohwa nemaperembudzi.+ 11 Aroni akabva ati kuna Mosesi: “Pamusoroi, ishe wangu! Ndapota, regai kutiverengera chivi chataita nenzira youpenzi!+ 12 Ndapota, musaita kuti arambe akaita somunhu akafa,+ ane imwe nyama yakadyika panguva yaakabuda muchibereko chaamai vake!” 13 Mosesi akachema kuna Jehovha, achiti: “Haiwa Mwari, ndapota! Ndapota, muporesei!”+ 14 Jehovha akabva ati kuna Mosesi: “Kudai baba vake vaizomupfira mate+ kuchiso chake, haaizonyara kwemazuva manomwe here? Ngaaiswe kwake oga+ kunze kwomusasa+ kwemazuva manomwe, uye pashure paizvozvo ngaagamuchirwe.”+ 15 Naizvozvo Miriyemu akaiswa kwake oga kunze kwomusasa kwemazuva manomwe,+ uye vanhu havana kutama kusvikira Miriyemu agamuchirwa. 16 Pashure paizvozvo vanhu vakatama paHazeroti,+ vakanodzika musasa murenje reParani.+